Muqdisho City Club oo guul ay ka gaartay Kooxda Dekedda ku daah furatay tartanka General Daa’uud – Gool FM
(Muqdisho) 23 Okt 2019. Kooxaha murqo weynta dalka ee Dekedda iyo Muqdisho City Club ayaa galabta kulan xiiso badan ku wada ciyaaray garoonka Eng Yariisoow Stadium Ex-Koonis, ciyaar ka tirsanayd koobka General Daa’uud ee fasal ciyaareedkan.
Kooxda Muqdisho City Club ayaa guul kaga daah furatay tartanka General Daa’uud kaddib markii ay galabta guul muhiim ah ka gaareen naadiga Dekedda, waxaana ay sidaas ku qaateen maanta saddexdoodii dhibcood ee ugu horreeyay tartankan.
Kulankan oo ahaa mid adag, maadaama ay iska horyimaadeen kooxda difaacanaysa koobka General Daa’uud ee MCC iyo kooxda difaacanaysa horyaalka Somali Premier League ayaa waxaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay ayay labada kooxood la yimaadeen fursado goolal loo filan karay, laakiin ugu dambeyn waxaa goolka daah furka heshay Kooxda Muqdisho City Club.
Muqdisho City Club ayaa waxaa goolkaas u dhaliyey qeybta labaad ciyaarta, ciyaaryahan Feysal Hazard sidaas ayayna kaga adkaadeen Dekedda 1-0, iyagoo soo gabagabeeyey rikoorkii guul la’aanta ee ka haysatay kooxda xafidanaysa horyaalka Soomaaliya ee Dekedda.
Kooxda Muqdisho City Club ayaa guul ka gaarin 13-kii kulan ee ugu dambeeyey maanta ka hor naadiga Dekedda, waxaana ay kala kulmeen 8 guuldarro iyo 5 barbaro, balse sheekadaas ayay maanta soo gabagabeeyeen oo waxa ay guul 1-0 kaga gaareen garoonka Ex Koonis ee Degmada C/casiis.